कसरी Tiscali ईमेल पढ्न को लागी मोबाइल फोरम
क्रिस्टियन गार्सिया | 27/09/2021 12:39 | ईमेलहरू
के तपाई एक प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ? Tiscali मेल र तपाइँ कसरी इटालियन प्लेटफर्म मा ईमेल पढ्न को लागी सोच्दै हुनुहुन्छ? यो हुन सक्छ कि जब सम्म यति लामो समय सम्म तपाइँ कुनै समस्या बिना Tiscali मेल प्रयोग गरीयो। तर एक दिन तपाइँ यन्त्र परिवर्तन गर्न को लागी ईमेल मा पढ्न को लागी थियो र तपाइँ पाउनुहुन्छ कि पहिले नै कन्फिगर गरिएको सबै चीज अब त्यहाँ छैन। अब तपाइँ तपाइँको खाता पुन: प्राप्ति गर्न को लागी आवश्यक छ र तपाइँ एक राम्रो हंगामा छ कि तपाइँ कहाँ शुरू गर्न को लागी थाहा छैन। खैर, त्यो के हो यो लेख को बारे मा छ। हामी यो पक्का गर्न जाँदैछौं कि तपाइँ पनी Tiscali मा ईमेलहरु पढ्न र लेख्न सक्नुहुन्छ।
एक नि: शुल्क र मान्य अस्थायी ईमेल कसरी बनाउने
एक priori मात्र चीज तपाईलाई चाहिन्छ सबै प्रवेश गर्न को लागी हो नयाँ उपकरण मा वा ती सबै जसमा तपाइँ Tiscali मेल को उपयोग गर्न जाँदै हुनुहुन्छ मा विन्यास। त्यहाँ बाट उपकरण को सफ्टवेयर, जे होस् यो हो, कुनै पनी समस्या बिना सबै गर्नु पर्छ। केवल केहि सेकेन्ड मा यो कन्फिगर गर्नु पर्छ र तपाइँ कुनै पनी समस्या बिना ईमेल पढ्नु पर्छ। हामी मान्दछौं कि तपाइँ विशिष्ट प्रणालीहरु को उपयोग गर्नुहुन्छ त्यसैले हामी विन्डोज, म्याक ओएस, एन्ड्रोइड र आईओएस को बारे मा लगातार कुरा गर्न जाँदैछौं।
1 कसरी तपाइँको पीसी मा Tiscali मेल ईमेल पढ्न को लागी
1.1 विन्डोज १० मा ईमेल पढ्नुहोस्
1.2 म्याक ओएस मा ईमेल पढ्नुहोस्
1.3 वेबसाइट बाट अनलाइन ईमेल पढ्नुहोस्
1.4 आईओएस र एन्ड्रोइड मा ईमेल पढ्नुहोस्
कसरी तपाइँको पीसी मा Tiscali मेल ईमेल पढ्न को लागी
जुन आज हामीलाई थाहा छ तपाइँ Tiscali द्वारा डिजाइन गरीएको विशेष सफ्टवेयर पाउनुहुन्न तपाइँको पीसी मा तपाइँको ईमेल पढ्न को लागी। यो गर्न को लागी तपाइँ अन्य राम्रो ज्ञात कि एक ग्राहक छ र त्यहाँ बाट तपाइँ समस्या बिना सबै कुरा पढ्नु हुनेछ जान्न को लागी हुनेछ। कुनै पनी मामला मा र हामी Tiscali को बारे मा कुरा गरीरहेछौं कि तपाइँ कसरी उनीहरुलाई पढ्न को लागी सक्षम हुन को लागी जाँदै हुनुहुन्छ Windows 10 कुनै समस्या बिना। हामी आशा गर्दछौं कि तपाइँ आफैंलाई अरु को ग्राहकहरु बाट मद्दत गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, जस्तै Windows 10 ईमेल अनुप्रयोग।
विन्डोज १० मा ईमेल पढ्नुहोस्
यो धेरै गाह्रो छैन तर तपाइँ चरणहरु मा ध्यान दिन को लागी हुनेछ। तपाइँ Wiwndows १० मेल अनुप्रयोग को उपयोग गर्नु पर्छ कि तपाइँ पहिले नै तपाइँको पीसी मा स्थापित गरीएको छ, जस्तै हामीले भने। यो गर्न को लागी, अनुप्रयोग को शुरू मेनू मा जानुहोस् र प्रशासक खाताहरु को लागी हेर्नुहोस् र एक पटक तपाइँ त्यहाँ हुनुहुन्छ तपाइँ एक खाता जोड्नु पर्छ सबै सेटिंग्स खोल्न को लागी। अब तपाइँ अर्को खाता मा क्लिक गर्नु पर्छ र सबै जानकारी भर्न को लागी प्रत्येक क्षेत्र मा अनुरोध गरीएको छ: ईमेल, तपाइँको नाम, पासवर्ड कि तपाइँ Tiscali र अन्य क्षेत्रहरु संग कन्फिगर गरीएको छ। यसको कुनै घाटा छैन।
२१ जिमेल ह्याकहरू जुन तपाईंलाई चकित पार्ने छ
जब तपाइँ यो सबै प्रक्रिया पूरा गरीरहनु भएको छ तपाइँ लग इन गर्न को लागी क्लिक गर्नु पर्छ। तपाइँ यो अनुप्रयोग को तल मा र सुरु मा ईमेल अनुप्रयोग को पाउनुहुनेछ Windows 10 मात्र तपाइँको Tiscali मेल कन्फिगर गर्नु पर्छ। जब प्रक्रिया पूरा हुन्छ तपाइँ मा क्लिक गरीएको छ र मेल अनुप्रयोग पुन: खोल्नु पर्छ। अब तपाइँ बायाँ तिर तपाइँको Tiscali ग्राहक हुनेछ यो मा क्लिक गर्न को लागी र सबै ईमेलहरु कि पढ्न को लागी सक्षम हुनुहोस्। यदि यो कन्फिगर गरिएको छैन, यो IMAP प्यारामिटरहरु को आवश्यकता हुन सक्छ।
म्याक ओएस मा ईमेल पढ्नुहोस्
यदि, अर्कोतर्फ, तपाइँ एक म्याक ओएस प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ र तपाइँ त्यहाँ Tiscali ईमेल कन्फिगर गर्न चाहानुहुन्छ, हामी तपाइँलाई यो कसरी गर्ने भनेर देखाउन जाँदैछौं। यो विन्डोज १० बाट फरक छैन किनकि एप्पल को आफ्नो एप छ मेल को जुन मा तपाइँ व्यावहारिक रूप मा अघिल्लो चरणहरु दोहोर्याउनु पर्छ। यदि तपाइँ म्याक मेल अनुप्रयोग थाहा छैन, यो मूलतः एक हो कि एक पत्र मा एक टिकट जस्तै छ। यो यी सबै बर्षहरु को दौरान परिवर्तन भएको छैन र यो आजीवन एक हो।
तपाइँ यसलाई सुरु गर्न को लागी र मेल मेनु को उपयोग गर्नु पर्छ र त्यसपछि फेरि एक खाता थप्न को लागी जानुहोस्। एकपटक तपाइँ यो कदम पूरा गरेपछि तपाइँ अर्को ईमेल खाता दिनुहोस् र त्यस पछि अनुसरण बटन क्लिक गर्नुहोस् र विन्डो मा तपाइँको ईमेल को संकेत छ कि तपाइँको लागी खोलिएको छ। नाम, Tiscali ईमेल ठेगाना र पासवर्ड: फेरि तपाइँ तपाइँको डाटा प्रविष्ट गर्न को लागी हुनेछ कि तपाइँ कन्फिगर गर्नुभयो। अब लग मा क्लिक गर्नुहोस् र ईमेल मा जानुहोस् ताकि अनुप्रयोग तपाइँ Tiscali खाता मा थियो सबै डाटा सिंक्रोनाइज गर्न सक्नुहुन्छ। समाप्त गर्न, बस समाप्त बटन मा क्लिक गर्नुहोस्। यस तरीकाले तपाइँ Tiscali ईमेल तपाइँको म्याक ओएस ल्यापटप वा डेस्कटप कम्प्यूटर मा कन्फिगर गरीन्छ।
ईमेल पढ्नु अघि कसरी मेट्ने
यो पनि हुन सक्छ कि प्रक्रिया समाप्त हुँदैन र स्वचालित कन्फिगरेसन काम गर्दैन। यो सबैभन्दा खराब मामला हो किनकि यो Windows 10 र यसको मेल अनुप्रयोग सेटिंग्स संग हुन्छ। त्यस अवस्थामा तपाइँ म्यानुअल रूप बाट कन्फिगर गर्न को लागी आवश्यक पर्दछ IMAP ईमेल मापदण्डहरु र त्यो अर्को केहि लामो कहानी हो।
वेबसाइट बाट अनलाइन ईमेल पढ्नुहोस्
माथिका सबै धेरै बोझिला लाग्छ? तपाइँ तपाइँको कम्प्यूटर मा जहाँ तपाइँ मेल हेर्न चाहानुहुन्छ कुनै ईमेल अनुप्रयोग चाहनुहुन्न? ठिक छ तब हामी यसको लागी एक समाधान छ र तपाइँ पनि Tiscali मेल अनलाइन पढ्न को लागी सक्षम हुनुहुनेछ। तपाइँ पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि उपलब्ध ब्राउजर बाट Tiscali वेबमेल तपाइँको पर्सनल कम्प्यूटर मा कुनै समस्या बिना।
यो गर्न को लागी तपाइँ पहिलो मा Tiscali वेबमेल मा जानु पर्छ, एक पटक तपाइँ त्यहाँ हुनुहुन्छ तपाइँ तपाइँको Tiscali प्रमाण पत्र, त्यो हो, प्रयोगकर्ता नाम, जो मूलतः के हो आवश्यक पर्दछ। precedes @ tiscali.it र पासवर्ड कि तपाइँ मेल प्लेटफर्म मा कन्फिगर गर्नुभयो। अब तपाइँ लग इन मा क्लिक गर्नु पर्छ र त्यो यो हुनेछ। यस संग तपाइँ पहिले नै Tiscali भित्र प्रत्येक पनी कुनै पनी समस्या बिना तपाइँको ट्रे मा इमेलहरु को प्रत्येक पढ्न को लागी सक्षम हुनुहुनेछ। निस्सन्देह, तपाइँ पनि लेख्न र कुनै पनि सेवा प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ कि Tiscali छ जब देखि तपाइँ यसको वेबमेल मा हुनुहुन्छ।
आईओएस र एन्ड्रोइड मा ईमेल पढ्नुहोस्
क्रम मा आफैलाई बारम्बार दोहोर्याउन को लागी, हामी आशा गर्छौं कि हो, फेरि हामी एक आधिकारिक Tiscali अनुप्रयोग छैन तर हामी दुबै मोबाइल फोन अपरेटि systems सिस्टम मा आधिकारिक मेल अनुप्रयोगहरु छन्। तेसैले, तपाइँ ती मध्ये प्रत्येक मा Tiscali ईमेल कन्फिगर गर्न को लागी हुनेछ। तपाइँ बिल्कुल उही चरणहरु को पालन गर्नु पर्छ जुन तपाइँ म्याक ओएस र विन्डोज १० एप्स संग गर्नुभएको छ। चिन्ता नगर्नुहोस् किनकि उनीहरु तपाइँलाई बिल्कुल उही जानकारी को लागी सोध्नेछन् कि उनीहरु को लागी तपाइँले सोध्नुभयो: Tiscali ईमेल, पासवर्ड, नाम ... एक पटक तपाइँ यो कन्फिगर गर्नुभयो, तपाइँ तपाइँको एन्ड्रोइड वा आईओएस मा त्यो ईमेल बाट ईमेल पढ्न सक्षम हुनुहुनेछ। फोन।
हामी आशा गर्दछौं कि यो लेख तपाइँको लागी उपयोगी भएको छ र तपाइँ अब पढ्न र कुनै समस्या बिना Tiscali मेल मा लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ प्लेटफर्म को कन्फिगरेसन को बारे मा कुनै प्रश्न छ भने, तपाइँ हामीलाई पढ्न को लागी टिप्पणी बक्स मा सबै छोड्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » इन्टरनेट » ईमेलहरू » कसरी Tiscali ईमेल पढ्न